Vegan marzipan mabhora - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Snack27 maminitsi24 vanhu115 makarori
Kugadzirira aya vegan marzipan mabhora ari nyore zvekuti kunyangwe mudukusa weimba anogona kutibatsira uye kupa chikamu chako mumhemberero dzeKisimusi.
Zvikafu izvi zvakagadzirirwa vese vanotakura a vegan, vegetarian kana kudya kusina mazai uye havadi kusiya zvinonaka zvechivanhu.
Ivo vanogadzirwa kubva almond uye kokonati uye vane crunchy chocolate coating iyo inofadza mhuri yese.
1 Vegan marzipan mabhora
2 Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve aya vegan marzipan mabhora?
Mabhora anonaka ari nyore kugadzira zvekuti unogona kuashandisa kubika nevana.
Nguva yekugadzirira: 20M
Kubika nguva: 7M
Nguva yakazara: 27M
200 g yeupfu hweamondi (ona recipe)
100 g yakashayiwa coconut
30g maple manyuchi
30 g yemvura kokonati mafuta
180 g vegan chocolate tsvuku
Tinoisa furawa yeamondi, kokonati, sirasi yemepu uye kokonati mafuta mugirazi. Isu tinosanganisa panguva Masekonzi mashanu, kumhanya 30.
Nemaoko ane mafuta mashoma tinogadzira mabhora anenge 15 g. Tinovaisa patireyi uye, kana vose vakagadzirira, tinovaisa mufiriji kwemaminitsi gumi nemashanu.
Mugirazi yakachena uye yakaoma tinoisa chokoreti uye tinoiisa panguva Masekonzi mashanu, kumhanya 10. Tinoinyungudutsa panguva 5 maminetsi, 37º, kumhanya 1.
Tinovhara mabhora nechokoti yakanyunguduka uye tinoaisa pachigadziko kana tireyi kusvikira chokoreti yakaoma.
Panguva yekushumira, tinovaisa patireyi yakanaka uye tinoshumira pamwe chete nemamwe masiwiti eKisimusi.
Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve aya vegan marzipan mabhora?
Aya mabhora ari nyore zvekuti unongoda kusanganisa zvinongedzo, kugadzira mabhora uye kuapfekedza muchokoreti. In nyaya yemaminitsi uchavaita kuti vakushumire.
Kunyange zvazvo vanogonawo kuva ita pamberi. Izvi zvinoshanda chaizvo nekuti unogona kuzvironga zviri nani uye siya nguva yeaya mabikirwo anoda kutariswa kweminiti yekupedzisira.
Se vanochengeta zvakanaka mufiriji for at least 1 week though I don't think they stay that long because iwo muyedzo chaiwo.
Kana zvasvika pakunyungudisa chokoreti muresipi une mirairo yekuzviita neThermomix® asi unogona zvakare kushandisa microwave. Inokurumidza asi yeuka kuti iwe unofanirwa kushandisa nguva pfupi yemasekonzi gumi nemashanu kudzivirira kupisa.
For the decor, mabhora aya anobvuma marudzi ese eruzivo. Unogona kushandisa grated coconut, upfu orenji, masprinkles ane mavara uye kunyange kubwinya kunodyiwa negoridhe.
Panguva ino ndashandisa chocolate yakasviba asi inzwa wakasununguka kushandisa chokoreti chaunofarira zvakanyanya Asi ita shuwa kuti yakakodzera kune vegans uye kuti haina zvisaririra zvezai kuitira kuti vaenzi vako vanakirwe nazvo 100%.
Mamwe mashoko - Kisimusi menyu yakagadzirwa pamberi / Yakakanyiwa orenji svuura
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Nyore, Navidad, Keke
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Keke » Vegan marzipan mabhora